Azuqua: Wepu Silos gi ma Jikọọ Igwe ojii na SaaS Ngwa | Martech Zone
Azuqua: Wepu Silos gi ma Jikọọ igwe ojii na Ngwa SaaS
Monday, November 23, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Matt Shanahan
Kate Legett, VP na onye nyocha isi na Forrester na Septemba 2015 blog post dere na post ya, CRM na-ekewa. Ọ bụ Okwu Na-ese Okwu:
Debe ahụmịhe ndị ahịa n'ihu na etiti ụlọ ọrụ gị. Jide n'aka na ị na-akwado ndị ahịa gị site na njedebe ha iji kwụsị njem na ịdị mfe, nke dị irè, nke na-atọ ụtọ, ọbụlagodi mgbe njem ndị ahịa gafere nyiwe teknụzụ.
Nkọwa nke CRM na-emepụta ihe mgbu na-adaba na ahụmịhe ndị ahịa. Nkwupụta igwe ojii nke 2015 site Netskope na-ekwu na nkezi ụlọ ọrụ na-eji ngwa 100 gafee ahịa na CRM. Ọ bụ ezie na ngwa SaaS na-akwalite arụmọrụ dị egwu, ha na-emekwa ihe mgbagwoju anya maka ndị ọrụ azụmaahịa - dịka ijikọta na nyochaa data ndị ahịa. Ọmụmaatụ, eCosultancy chọpụtara na na-ebugharị data n'etiti usoro (74%) bụ otu ihe ịma aka ahịa kachasị egbu mgbu, na Bluewolf hụrụ nke ahụ 70% nke ndị ọrụ Salesforce ga-abanye na otu data ahụ n'ọtụtụ sistemụ.
Azuqua na enyere ndi ahia aka idozi 'ihe mgbu a na ngwa ha' site n'inye ndi oru ahia ike ijikọ igwe ojii na ngwa SaaS n'okpuru otu nkeji, tinyere azịza ohuru a na-akpọ Azuqua maka Ọganihu Ndị Ahịa. Ezubere iji kpochapụ siloes kere site na CRM disparate, akpaaka ahịa, ọrụ na ngwa nkwado, Azuqua for Success Customer na-enye ndị ọrụ azụmaahịa ohere iwekota data, na-akpaghị aka na-arụ ọrụ azụmaahịa ma na-achịkwa ahụmịhe ndị ahịa. Azuqua maka Ọganihu Ndị Ahịa dị malite na $ 250 kwa ọnwa.
Azuqua for Success Customers na-enweta CRM anyị, nkwado na ngwa njikwa njikwa na-arụ ọrụ iji kpochapụ ntinye akwụkwọ ntuziaka. Site na akpaghị aka na-agagharị data, ahịa anyị, nkwado anyị na ndị otu ihe ịga nke ọma ndị ahịa nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa ka elu Thomas Enochs, VP nke Successga nke Ọma na Onye Nri
Azuqua maka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa nwere atụmatụ njikọ 40, gụnyere FullContact, Gainsight, Marketo, Salesforce, Workfront na Zendesk, na ebumnuche arụmọrụ 15 emere. Na ọkwa ọ bụla na njem ndị ahịa, Azuqua na-ahapụ ndị ọrụ azụmaahịa jikọtara ngwa SaaS ha, na-arụ ọrụ azụmaahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa, ma na-achịkwa ahụmịhe ndị ahịa.
Igwe ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na-achọ ka ngwa gị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji nweta data na-agbanwe agbanwe n'otu ntabi anya kesara isi ihe ndị ahịa nwere ike. Ihe dị mkpa na oge kwesịrị ekwesị, yabụ mgbe ngwa ọdịnala kwụsịrị ngwa ngwa na mmejọ, nke na-apụta na ego furu efu. Ihe ngwọta anyị na-ebelata ihe mgbu gị site n'ịhụ na data sitere na akaụntụ na kọntaktị na-agbanwe agbanwe na ngwa ọ bụla, ọkwa ndị ọrụ na ịdọ aka ná ntị bụ oge, na nkwụsị aka ziri ezi. Nikhil Hasija, onye isi na ngalaba-onye guzobere na Azuqua
Azuqua maka usoro ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa gụnyere:
Ahịa njem: weghara ma dekọọ akara ngosi nke ọma ndị ahịa na mwepu na ntinye, ntinye, ọzụzụ, na nyocha.
Mkpọkọta mkpokọta: centralize akaụntụ na kọntaktị data gafee niile usoro nke njikọ aka site na nkwado na ahịa na-online obodo.
Uto: jikọta na isi mmalite ihe ịga nke ọma ndị ahịa dị ka FullContact iji tinye data na akpaghị aka na akaụntụ na ndekọ kọntaktị.
Ozi: nyochaa maka ihe ndị dị mkpa ndị ahịa na-eme nke ọma ma ọ bụ omume ma zipụ ọkwa na ezigbo oge site na email, ederede, ma ọ bụ ozi ngwa ngwa.
Nchịkọta data: hụ na emelitere akaụntụ ọhụrụ ma ọ bụ emelitere na kọntaktị data emelitere na nkwado, ịgba izu, ọzụzụ, ahịa, obodo na ngwa ndị ọzọ.
Usoro nhazi: debe ihe aga-eme na ihe emelitere n’oge dị gafee ngwa ndị a.
Debanye maka nnwale efu nke Azuqua
Maka ozi ọzọ, gaa na Azuqua.
Tags: azuquablọwCRMdatadata silosNwokeKpọtụrụgainsightKate Legettahịa datammekọrịta data ahịaahia mwekotaahịaNikhil Hasijandị ahịaThomas EnochsEbe ihu ọrụOnyebuchi
Matt Shanahan bụ CMO na Azuqua, ụlọ ọrụ na-enyere azụmaahịa aka na-arụ ọrụ arụmọrụ n'etiti ngwa SaaS, gụnyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email, akpaaka azụmaahịa ma ọ bụ sistemụ CRM ndị dị oke mkpa maka ọganiihu ndị ahịa. Matt nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ teknụzụ, sitere na Accenture to startups. Ọ bụ onye ọchụnta ego gosipụtara dị ka VP nke azụmaahịa ngwaahịa na njikwa maka Documentum site na mbido site na mbupụta ihu ọha mbụ yana n'oge na-adịbeghị anya dịka onye nchoputa na SVP nke atụmatụ maka Scout Analytics.
12 Echiche iji mee ka ọdịiche dị na ahịa gị dị iche
Nov 25, 2015 na 4:55 PM
Nke a bụ ezigbo nnukwu ọkwa n'ezie. Echere m na ị tinyela mgbalị dị ukwuu iji mepụta post a ma ọ baara m na ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ uru. Daalụ maka ịkekọrịta ụdị ozi ọma a.